Ukulethwa kwezimbali kwezinhlangano ezisemthethweni ngokudluliswa kwamabhange eMoscow | Inkokhelo evela ku-akhawunti yokukhokha yenhlangano
Ukulethwa kwembali kwezinhlangano ezisemthethweni ngokudluliselwa kwebhange eMoscow.
Ufuna uku-oda izimbali njengenhlangano esemthethweni. umuntu okhokhelwe kwi-akhawunti yasebhange eMoscow?
Uku-oda ngokudluliswa kwebhange kulula!
Ungathanda uku-oda izimbali khona manje? - vele ukhethe isixha se I-Floristum.ru eMoscow, nasekhasini le-oda, khetha indlela yokukhokha "Okungeyona imali yezinhlangano ezisemthethweni", gcwalisa imininingwane bese isivumelwano sizothunyelwa ngokushesha eposini lakho bese kukhishwa i-invoyisi.
Ngabe uncamela ukwenza isivumelwano kusengaphambili bese u-oda izimbali kusengaphambilini? - sicela usibhalele mayelana nezinhloso zakho: corporate.floristum.ru/en noma ushayele: 8 800 600-54-97.
Izinhlobonhlobo zezimbali ngamanani alethwe kusayithi anikezwa njengomphakathi isipho sokuhweba sezimbali yezinhlangano ezisemthethweni.
Izinzuzo zokusebenza ne- I-Floristum.ru eMoscow yezinhlangano ezisemthethweni
(okunikezwayo kwezentengiselwano ngezimbali ezilethwayo):
Izimbali zaletha usuku nosuku eMoscow nanoma yiliphi idolobha laseRussia ngaphansi kwenkontileka eyodwa.
Lapho usuqede inkontileka eyodwa, unga-oda izimbali nezipho kunoma yiliphi idolobha laseRussia lapho kusebenza khona i-Floristum.ru, futhi lezi yizindawo zokuhlala eziningi lapho kuhlala khona amakhasimende akho kanye nozakwenu!
Ukukhokhelwa kwezimbali kusuka ku-akhawunti yasebhange yenhlangano.
Uhlelo olulula oluzenzakalelayo lokukhokha ama-invoice kusuka ku-LLC "FLN" (Floristum.ru) kwimininingwane yenhlangano yakho esemthethweni, ngendlela yoku-oda isixha. Awudingi ukubhala noma yikuphi, ushayele futhi uthethelele umthethosivivinywa, uhlelo luzokhipha i-invoyisi ekhelini le-imeyili olichazile.
Izinkulungwane zezimbali zitholakala Okuhle.biz eMoscow!
Ukulethwa kwe-oda kusuka kunoma yimuphi umuzi kunoma yiliphi idolobha laseRussia! Konke okudingayo ukucacisa idolobha, khetha isixha sezimbali esifanele futhi ucacise nemingcele yokulethwa.
Izindleko eziphansi zezimbali.
I-Floristum.ru iyinsiza lapho izitolo zezimbali nezinkampani ezithengisa kakhulu zinikela ngezimbali nezingoma zazo. Uma uthenga lapha, ungaqiniseka ukuthi uzothola isixha esikhulu esivela kochwepheshe ngentengo ekhangayo.
Inkontileka eyodwa yoku-oda kusuka ezinkulungwaneni zezitolo zezimbali.
Ngokuphothula inkontileka eyodwa, uthola ithuba lokuthenga izimbali ezitolo eziyizinkulungwane ezinhlanu. Ingosi inokukhethwa okukhulu kakhulu kwezimbali ngakho konke ukunambitheka. Cabanga - ngaphezu kwezinkulungwane eziyikhulu. Futhi ungabathenga ngokuchofoza kabili. Udinga nje ukufaka imininingwane yakho ngendlela elula kanye kuphela, ngokuzayo bazongezwa kwifomu loku-oda ngokuzenzakalela.
Ukuvikelwa kubakhwabanisi nezinsizakalo ezisezingeni eliphansi.
Lapho u-oda futhi ukhokhela izinsizakalo nge-Intanethi, akunzima ukukhohlisa amaqhinga abakhwabanisi bese umosha imali yakho, noma umane uthenge insizakalo esezingeni eliphansi. Ingosi yeFloristum.ru inohlelo lokuvikela amakhasimende. Kuze kuphothulwe i-oda lakho, umthengisi wezimbali ngeke ayithole imali yalo. Lokhu kuqinisekisa ikhwalithi yomsebenzi owenziwayo, ukuphepha kwezindawo zokuhlala kanye nesiqinisekiso esingu-100% sokubuyiselwa kwemali kwiklayenti.
Imibhalo yokuvala engenankinga.
Enye inzuzo ukuthi imibhalo evala isivumelwano ithunyelwa ku-accountant yakho ngokuzenzekelayo ngaphandle kwezikhumbuzi. Khohlwa ukuqoqa amarisidi, amaskeni, imibiko yokuthenga. Manje, uthola nje okwangempela kukheli lakho leposi bese uskena i-imeyili yakho. Kuyinto elula futhi elula kakhulu!
Asinazo izindleko ezingeziwe lapho sikhokha kusuka ku-akhawunti yamanje.
Izintengo zezimbali ziyefana nezabantu ngabanye. abantu:
5250 XNUMX ₽ Inqwaba yezimbali 69
8176 XNUMX ₽ Inqwaba yezimbali 246
I-Misty Bubbles iyakhanya futhi intekenteke ngasikhathi sinye, inephunga elimnandi ngehlumela elihle eliyindilinga. Lona othengisa kakhulu kithi - ngokuphelele wonke amantombazane ayayithanda. Uma ungazi ukuthi uzonikani, nikeza iMisty Bubbles - awukwazi ukungahambi kahle.
46000 XNUMX ₽ Ama-bubble angama-51 ebhokisini
Ngokwemvelo, lesi sixha sama-strawberry anama-roses sizonxenxa noma ubani owabonayo, ngaphandle kokukhetha, ngoba kuyisibonakaliso sobuhle obuyingqayizivele, iphunga lokunisela umlomo nokunambitheka okumnandi !!!
2300 XNUMX ₽ Inqwaba yezimbali 378
5690 XNUMX ₽ Isixha sama-rose angu-35 abomvana
I-rose elikhanyayo elingu-101
4700 XNUMX ₽ 101 rose
Isixha esibucayi sama roses amhlophe ayi-101.
14600 XNUMX ₽ Isixha sama-roses amhlophe ayi-101
Bona zonke izimbali ezinezintengo eziphansi